महाभुकम्पमा पुरिएको २२ घण्टापछि जीवितै झिकिएका बालक सोनिस अवालको घरमै पुग्दा(भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > समाचार > महाभुकम्पमा पुरिएको २२ घण्टापछि जीवितै झिकिएका बालक सोनिस अवालको घरमै पुग्दा(भिडियो सहित)
महाभुकम्पमा पुरिएको २२ घण्टापछि जीवितै झिकिएका बालक सोनिस अवालको घरमै पुग्दा(भिडियो सहित)
admin January 3, 2019 समाचार	0
काठमाडौं । २०७२ साल बैशाख १२ को महाभुकम्पमा २२ घण्टा पुरिएर जिवितै उद्दार गरिएका ४ महिनाका सोनीस अवालले उक्त समय अन्तराष्ट्रिय चर्चा पाएका थिए। भक्तपुरस्थित घर भत्केपछि सोनिस पुरिएका थिए।
यतिबेला सोनिस अवाल ५ बर्षका भैसके । सोनीसको परिवार भक्तपुरमा ब्यासी नजिकै कोठा भाडामा लिएर बसेको छ। एउटा सानो कोठामा ४ जनाको परिवार बसिरहेको छ। उक्त कोठा ४ जनाकालागि अतिनै साँघुरो रहेको छ।
भुकम्पको त्यो दिन सम्झँदा रस्मिताको अनुहारको रंग अहिले पनि फेरिन्छ। ‘सम्झन मनै नलाग्ने तर सम्झनाले सधैँ झस्काउने दिन हो त्यो,’ रस्मिता तीतो सम्झना पोख्दै भन्छिन्, ‘छोरा छोरीको आशै भएन, श्रीमानको बारेमा पनि अन्जान थिए।’
हामीले ल्याएको उपहार हेर्न आतुर सोनिसले मन थाम्न सकेनन् । उपहारको बाकस खोलिहाले । भित्र चक्लेट छ कि भनेर गेस गरेका सोनिष रिमोटवाला कार पाएपछि झनै दंग भए । अनि खेल्न थालि हाले । छोराले साईकल माग्छ तर सोनिसको परिवारसंग साईकल किन्दिने पैसा पनि छैन । सोनिसको बाबा गाडी चलाउंछन् अनि आमा सिलाई गर्छिन् ।
दुख पिडा बोकेर पनि जापानमा नेपाल आइडल रवि ओडले यसरी नचाए दर्शक (भिडियो)
भर्खरै थपियो अर्को दुखद खबर : मृत आत्माहरुलाइ ….रिप लेखेर शेयर गरौ
रमेश र नन्दाको बैबाहिक जीवनबारे माता सविताले गरिन् यस्तो भ’बिष्यवा’णी, (भिडियो हेर्नुस्)
धनगढीमा बम विष्फोट, ५ घाइते, घटनास्थलमा पेस्तोल भेटियो
ज्ञानेन्द्र सर ! तपाईको जाँचमा मा पसे गरेको देखियो नी ? (भिडियो हेर्नुस्)
यी आमा बाबाले बेचिदिए यस्तो लोभमा जन्मेर आँखा खुल्न नपाउदै आफ्नो सन्तान